MyYappyDog: Social CRM maka ndị ọrụ ụlọ ala | Martech Zone
Enwere mmalite ọhụrụ nke na - enweta traction na Indianapolis Ndị na-ere ahịa ụlọ, a na-akpọkwa ya Nkịta Yappy m. Y’oburu n’inwe ike ijiko ikpo okwu nkparita uka di nfe na ebe nzuzu banyere nmekorita ndi ahia, i nwere Social CRM nke ana akpo My Yappy Dog.
3 n’ime ndị ahịa 4 na-azụ ahịa ala na ụlọ ahịa kwuru na ha ga-azụkwa ahịa ọzọ na onye nnọchi anya ha, mana naanị 15% na-eme! Dawn Schnaiter, Onye guzobere Nkịta Yappy m.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere naanị ọnụ ahịa dị mfe ma dịkwa mfe maka ijikọ ndị ahịa ha, ha ga-adị ya mgbe ndị ahụ ga-akwaga ebe ọzọ, too n'ime ụlọ buru ibu, ma ọ bụ mgbe ezinụlọ ha ma ọ bụ ndị enyi ha na-achọ ire. Ihe niile gị n'ụlọnga ga-eme bụ na-emetụ isi n'isi oge… na Nkịta Yappy m ka ha mee nke ahụ.
The Social CRM n'elu ikpo okwu na - egosipụta ikike ị ga - eziga na ntanetị ọhaneze gị niile, igbe nnabata mmadụ iji nweta onyonyo, ikike izipu ma tụọ ọtụtụ ozi ịntanetị, yana njikwa ọdịnaya. Enwere ike mezuo nkwado site na iji akaụntụ nnyemaaka (na-akwụghị ụgwọ ọ bụla) yana ikikere ndị ọrụ akọwapụtara na ihe ha nwere ike ịhụ na enweghị ike ịhụ. Nke kachasị mma, ịkọ akụkọ banyere ọrụ gị, ire ahịa na mmefu gụnyere!
Ike CRM dị ukwuu, na-enye gị ohere igosi ndị ahịa kachasị mkpa ma dozie ọrụ maka ịgwa ha okwu kwa oge.
3 Pịa na Yap!
Igbe Mgbasa Ozi Social
Ihe Mgbaru Ọsọ na Mmefu
Dị ka ọ dị na nnukwu mbido, Achọrọ My Yappy Dog onye nwere mkpa - Dawn the Real Estate Agent - Riann Stroud - onye njikwa ngwaahịa jikọtara ikpo okwu! Enwere m mmasị mmalite ndị e wuru n'ihi na ndị ọrụ nwere nkụda mmụọ na enweghị azịza ya dị.
My Dog Yappy na-enye mmadu, ndi otu na ulo oru ịnye ọnụahịa!
Cheta na: The Nkịta Yappy m ikpo okwu bụ n'ezie zuru okè n'ihi na ọ bụla ngo ma ọ bụ onye na-eweta ọrụ… na interface ama customizable.
Tags: email Marketingmyyappydogahịa ịre ụlọndị na-eweta ọrụelekọta mmadụ crmnjikwa mmekọrịta ndị ahịa mmekọrịtaigbe nnabataonye nkwusa na-elekọta mmadụ